Nanazava ny Lanitr’i Japàna Nandritra ny Adiny Iray Ny Takonam-bolana Feno · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Oktobra 2014 17:14 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, বাংলা, polski, Español, 日本語
Araka ny Tobim-panjakana Fandinihana ny Lanitra ao Japàna, afaka nojerena manerana ireo vondro-nosy ilay takonam-bolana feno, afa-tsy tany amin'ny nosy Ishigaki (faritra Atsimo Andrefan'i Kyushu).
Mandritra ny takonam-bolana feno, bahanan'ny aloky ny Tany tanteraka ny hazavàna avy amin'ny masoandro, izay miteraka aloka maizina—ampahany lalina sy maizina indrindra amin'ny aloka—izay hisakanan'ilay singa mpibahana ny loharanom-pahazavàna. Mahita takonam-bolana feno noho izany ny mpijery iray tafiditra ao anatin'ilay aloka maizina.
Ny “Tôkyô SkyTree”, ilay tranobe avo indrindra ao Japàna, izay hazavainà jiro LED manga nankalazain'ireo nahazo ny Mari-pankasitrahana “Nobel” Japoney farany, ihany koa dia nandray anjara tao anatin'ireo fankalazàna io takonam-bolana io.
Mirehitra ho mavo kely indray mandeha isam-bolana fara-fahakeliny ny tapany ambanin'ny Tilikambon'i Tôkyô hanamarihana ny takonam-bolana feno, antsoina hoe “Lomboka Diamondran'ny Volana”. Ho an'ilay takonam-bolana, novonoina ireo LED amin'ny tapany ambonin'ilay Tilikambon'i Tôkyô ary narehitra kosa rehefa diavolana. Mba hamoronana tontolo mamofom-pitiavana, dia nandrehitra labozia ihany koa ireo olona tao anatin'ilay tilikambo, teny amin'ny varavarakely 100 teo ho eo tao amin'io tranobe io.